Madaxweynaha Mudadiisu Geba-gebada Tahay Oo Sameeyay Xil Ka Qaadis Iyo Magcaabis Masuuliyiin Xukuumaddiisa Ah | Araweelo News Network | Araweelo News Network
Madaxweynaha Mudadiisu Geba-gebada Tahay Oo Sameeyay Xil Ka Qaadis Iyo Magcaabis Masuuliyiin Xukuumaddiisa Ah
Hargeysa(ANN)Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo ku jira mudadii xilkiisa sharciga ah u danbaysay, ayaa sameeyay magcaabis iyo xil ka qaadis masuuliyiin xukuumadda ka tirsan.
Qoraal saxaafadeed kasoo baxay qasriga Madaxtooyada maanta gelinkii danbe, ayaa u qoraan sidan:-
“Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland Mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu digreeto madaxweyne oo sumadeedu tahay JSL/M/XERM/249-3129/032015 uu xilka qaadis iyo magacaabid ku sameeyey wakiilada Somaliland u fadhiya Dalalka Kenya iyo Jabuuti.
Markuu Tixgeliyey: Ahmiyadda Wakiiladda Somaliland u fadhiya dalalka dibaddu u leeyihiin dhismaha Qaranka.
Markuu Ka Fiirsaday: Kartidooda, aqoontooda iyo hufnaantooda shaqo; Markuu ku Qancay: In ay hanan karaan xilalkan loo magacaabay; Wuxuu go’aansaday sidan:-
Ku: Maxamuud Cabdilaahi Jaamac (Sifir), Wakiilkii Somaliland ee Hore ee dalka Kenya Nairobi
Mudane, Waxa aan aad kuugu mahadinayaa muddadii aynu wada shaqaynaynay. Xilalka Qaranka ayey dabcigeed tahay in ay meerto noqoto oo kolba cid hanan karta loo dhiibo.
Ku: Mudane, Maxamed Xirsi Qalinle, Wakiilkii Somaliland ee Hore ee dalka Jabuuti
Mudane waxaan gartay in aan kaa aqbalo codsigaagii ahaa warqada shaqo ka fadhiisinta ee xilka Wakiilka Jamhuuriyadda Somaliland u fadhiya Dalka Jabuuti.
Sidoo kale, waxaa Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ah, oo ay warqadani ogaysiin ugu socoto, la farayaa in uu labada masuul u kala wareejiyo xilka Wakiilka Jamhuuriyadda Somaliland u fadhiya Dalka Jabuuti.” Ayaa lagu yidhi Qoraalka kasoo baxayXafiiska Xoghayaha Saxaafada ee Madaxtooyada JSL.
Naasir Yuusuf Daahir.
Madaxweyne Siilaanyo, ayaa dhowaan isku bedel, magcaabis iyo isku shaandhayn ku sameeyay xukuumaddiisa qaybo ka mdi ah, waxayna tallaabooyinkani kusoo beegmeen iyadoo mudadii xilka dastuuriga ah ay uga hadhsan yihiin wax Afar Bilood, balse aanay waqtigan muuqan in doorashadu ku dhacay xiligii dastuuriga ahaa. Sidaa awgeed uu jiro olole xukuumaddu ku raadinay muddo kordhin muddo aan ka yarayn laba sannadood, taas oo aanay jirin mucaarad awood baddan oo ay xukuumaddu ka cabsi qabto.